Waa maxay sababta aysan u sameynin ciyaartoy waaweyn oo sameeya Linux? | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | GNU / Linux, Ciyaaraha, Kuwa kale
Waxaa laga yaabaa inay tahay wax aan hore looga hadal bogagga kale ama shaqsiyan aanan ku arag meelo kale. Arrin muran badan dhalisay oo aan doonayo in qof kastaa aragtidiisa u dhiibto, si kasta oo ay u xoog badan yihiin fikradda ay ka qabaan (haa Geesinimo, waad ku carari kartaa degenaansho buuxda
Xasaasi ah laakiin xiiso leh ... Waxaa jira dhowr arrimood oo aan u maleynayo inay yihiin sababaha suurtagalka ah ee shirkadaha sida EA, Valve, Blizzard, iwm. Ciyaarahaaga ha u qaadin Linux, oo aan u kala qaybin lahaa laba laamood:
2 Sababaha "muuska"
Darawaliinta. Waxaa laga yaabaa in ugu yar oo ansax ah oo dhan laakiin leh daciifnimadiisa, sida darawalada lacag la’aanta ah oo aan awood u lahayn ciyaaraha iyo milkiilayaasha qaarkood Qalabka AMD aad ayey uga liitaan dhiggooda M $ Güindous MS Windows. Waana inaan daacad ahaano, xitaa Nvidia, oo bixisa taageero aad ufiican, ma dhamaaneyso wax walbo oo qofna ma doonayo inuu sii daayo koodhka wadayaasheeda si bulshada ay u aaminto darawallo lacag la’aan ah oo karti leh (in kasta oo Nvidia ay sii deysay CUDA, ama ay badh samaysay). Laakiin waa wax laga adkaan karo haddii suuqa gamer-ka ee Linux uu bilaabo inuu koro maxaa yeelay taasi waxay ku qasbi doontaa soo saarayaashaan inay u dhaqaaqaan dhanka wanaagsan waxayna AMD sheegtay in mustaqbalka iyaga u ahaa uun Linux, Windows mana xasuusto waxa kale ...
Ruqsadaha iyo maktabadaha. Qodob kale oo aan ka maqlay shabakada, farsamada sidoo kale, ayaa ah inay jiraan maktabado aan u dhigmin Linux sababo shati ama sababtoo ah looma gudbin. Hagaag, dhibic ansax ah, laakiin si fudud loo beenin karo; maadaama wax walba loo gudbin karo Linux, wax badan oo ka sii badan haddii ay tahay C ama C ++ (sida ugu wanaagsan uguna caansan ee loo isticmaalo abuurista ciyaaraha, in kasta oo Python uu durba cuno habka
) Iyo rukhsadaha dartiis, runtu waa wax sidoo kale si fudud looga adkaan karo.
Muusigana waxaan u idhi maxaa yeelay waxay umuuqdaan kuwo doqonimo iyo doqonimo leh oo ay iga qosliyaan ...
"Ma jiraan ciyaartoy macquul ah oo ku jirta Linux", taas oo jabisa kubbadayda, anigu waxaan ahay, mid ka mid ah kuwa badan oo jecel inay ciyaaraan waqtiyadayada firaaqada ah ama aan siino ciyaar adag marka aan aragno daloolka ugu yar ee howsha, waana hubaa in ciyaartooy badan oo ciyaartooy ah ay ku ordi lahaayeen Linux (iyagoo og waxa ay yaqaanaan iyo inay yihiin DHAQAALAHA RUN) Markaan barto in shirkadaha waaweyni u horumariyaan Linux, waana ogahay sababta in qaar badan oo ka mid ah asxaabteydu ay u jecel yihiin inay yeeshaan pc / console, waxay iska ilaaliyaan kharash badan oo ay ku wada yeeshaan hal. Marka, xorriyadda, amniga iyo… Ciyaaraha? Utopia!
"Haddii aysan xor aheyn ma ciyaari doonaan iyaga" Oo kii sidaas yidhi, muxuu ahaa jahannamada loo qoday? Xagee laga dhahayaa kuweena adeegsada Linux ma isticmaali doonaan wax xiran sida ciyaarta kaliya maxaa yeelay ma ahan lacag la'aan? Waan ku faraxsanahay, dabada ... ma isticmaalo codsiyada lahaanshaha ee la xiriira shaqadayda maxaa yeelay waxaan ka fikiraa xorriyaddayda, laakiin ciyaar waa ka duwan tahay, ma fududa in nolol lagu kasbado iyadoo la bixinayo ciyaaro muddo dheer soo socday. , waa suuq ka duwan, aad u kala duwan. Sidoo kale, illaa iyo inta aanan u baahnayn inaan waxyeelleeyo xogteyda ama aan iga soo dejiyo waxyaabaha nooca gadaal-u-dhaca ah ee gawaarida lagu fulin karo, taasi waa caadi, waxaan doonayaa inaan ciyaaro mana ii sheegi doonaan inaan ciyaaro caqiidada gacan ku dhiiglaha, khadka tooska ah, qaabka sheekada waxay dhacaysaa xogtayda oo way I addoonsanaysaa ...
Laakiin waxaan ku dari karaa ra'yigeyga qaabka Taliban:
Waxaa jira shirqool u dhexeeya Microsoft iyo shirkadaha waaweyn ee ciyaarta
. Waxay u egtahay waali, waalan oo aan macquul aheyn, laakiin waxaan kaliya ku idhi, waxbaa laga yaabaa inay halkaas ka dhacaan, laakiin maxaan u heli kari waayey Dell leh Ubuntu oo horay loogu rakibay meel kasta? Oo arag inay sifiican u shaqeyneysay iibka ... Waxaa laga yaabaa in nooc ka mid ah heshiis ka soo horjeedka furitaanka ee qaabka lagu dilo rukhsadaha Java Mugdi iyo Run Sith Lord / Sauron Oracle… Garan maayo, maxaad u malayn?
Tifatiraha Nota del:
Maqaalka uu qoray nano en golahayaga. Wixii cabasho ah, soo jeedin ah ama aflagaado ah, fadlan u soo dir soynano@queteden.com.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Waa maxay sababta aysan ciyaartooyda waaweyni u naqshadeynin Linux?
Runtii waxaan ka arkaa dhinac ganacsi iyo horumar. Ku dhowaad dhammaan ciyaarihii ugu dambeeyay ee jiilku waxay adeegsadaan directx11 ama 10, taas oo macnaheedu noqon lahaa u beddelashada mashiinka furitaanka, waalan ..., kaliya ka fikir in tusaale ahaan haddii aad isku daydo inaad ku ciyaarto fiidiyoow leh wax soo saarka gl, oo leh iyo iyo qashinka fiidiyowga ..., tan labaad ayaa ah saamiga yar ee suuqa ee shirkadda Linux, ka fikir inay hadda bilaabayaan inay sii daayaan ciyaaro qaar OSX, oo leh saamiga suuqa 7-8%, qiyaasi Linux ..., aniga kaliya rajeynayaa in ciyaaro badan oo wanaagsan ay u soo baxaan sida amensia mugdiga mugdiga ah.
Xaqiiqdii, waa suurtagal in la xareeyo DirectX illaa Linux, waa la qorsheeyay, laakiin wax baa joojiyay.
Ciyaarta oo loo badalo OpenGL igama muuqato wax waali ah aniga, waqtigan xaadirka ah dhamaan kulamada hadii ay u soo baxaan PC sidoo kale waxay u soo baxayaan PS3, PS3-na waxay isticmaashaa OpenGL ES, markaa waa inaysan iyagana wax badan ku kicin.
Laakiin si fiican, waxaan u arkaa in badan oo ka mid ah sababta suuqgeynta, waa run in geeksyada Linux sidayada oo kale ah, ama ugu yaraan inteena badan, ay yihiin gamers, laakiin sidoo kale waxaan u maleynayaa in jinsigeena ka xoogbadan, waxay leedahay dad aad u yar marka la barbardhigo qaabab nololeed kale oo aad u horumarsan muwaadinka caadiga ah. Haddii aysan jirin dad badan sida ay rabaan, ma dhibayaan ...
waa la qaddarin lahaa haddii qof uu wax u dhigo "10-ka kulan ee ugu horreeya ee ganacsiga la jaan qaada Linux" ama wax la mid ah
Waxaan abuurayaa liis sida ugu macquulsan uguna macquulsan golaha, laga yaabee inay u soo geliyaan baloogga.
Waxaan sameyn doonaa 😀
Maya, waad iga tagtay odaygaygii hore, markaa waxaad fursad u haysataa inaad ku hesho saaxiibtiis cusub
Mise aniga ayey ii daayaan, marhoreba waxaan haystaa gabar saaxiibkeed ah waxayna mas'uul ka yihiin raadinta saaxiibtiis iyo nacaybka waxyaabaha siday u kala horreeyaan
Salaan Elav. Intii aan maqaalka akhrinayay, waxaan dareemay wax la yaab leh: ma ahayn habka aad wax u qorto, oo lagu daro waxaa jira sadar ay ka buuxaan qaladaad higgaadintu. Malaha wuu bukaa markuu qorayey, baan is idhi. Aakhirkii waan fahmay. Way fiicantahay in lala wadaago waxa dadka kale qoraan, laakiin bilowga boostada waxay umuuqataa sidii inaad adigu qortay. Waxaan u maleynayaa inaad abuureysid akoon baloog sida "martida", maxaa yeelay akhristayaasha aan macnaha lahayn (oo ay jiraan, xitaa aniguba mid baan ahaan lahaa) waxay u qaadan karaan inay yihiin ereyo magacaaga ah oo ay sameeyaan. Xaaladdan oo kale ma ahan mid culus, laakiin kuwa kale way ka duwanaan kartaa.
Mahad ballaaran ayaan u dirayaa Nano wadaagista macluumaadka. Dabcan, waxaan kugula talinayaa inaad iska hubiso sadarka "Wadayaasha" maxaa yeelay waa midka ay ka buuxdo isku duubnaanta iyo higgaadinta higgaadinta. Haddii aad ku dhiirratid inaad waxbadan qorto, xusuusnow inaad had iyo jeer dib u eegto waxa aad qortay, nasasho ka dib ama maalinta ku xigta. Dhankeyga, waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad sii wado qorista iyo la wadaagida akhristayaasha Desdelinux; Waxaan qiyaasayaa in Elav iyo Gaara ay u furan yihiin kuwa kale ee wax ku biiriya maqaallada.
Dhamaan waad salaaman tihiin.
Haha mahadsanid Carlos, Waxaan ka waday qoraalka nano oo waxaan ku daabacaa halkan barta, laakiin markii ugu horreysay waxaan doonayay inaan sharaxo faahfaahin taxane ah iyo kuwa kale, si loo fahmi karo inay tahay qoraal ka yimid xubin bulshada ka mid ah iyo, laakiin faahfaahsan Wuu horay usocday wax fursad ahna ima uusan siin 😀
Dabcan, dhinaceena waxaan uga furannahay furfurnaan nooc kasta oo caawimaad ah, qofkasta oo raba inuu wax daabaco wuxuu noo sheegayaa 😀
Ma aqaan inta ay le'eg tahay la'aanta "heshiisyada ganacsiga" ee u dhexeeya shirkadaha soo saara noocyada noocan ah ee cayaaraha iyadoo lala wadaagi karo macallimiinta Linux sidoo kale waxay saameyn ku leeyihiin. Waxaan uga fikirayaa sidan: Haddii shirkad fiidiyoow ah ay rabto inay ku soo bandhigto alaabteeda Linux, waxay raadin doontaa inay dejiso heshiisyo dammaanad qaadaya xaaladaha farsamada iyo hawlgalka si ay u baaraan suuqaas. Tan darteed layaab malahan inay doorbidaan inay raadsadaan wada-hadal hay'adeed, taas oo ka reebi doonta degmooyinka bulshada. Hadda, marka laga hadlayo ganacsiga ganacsiga (sida Redhat ama Suse), kuwani waa kuwo ku wajahan serverka, kuwaas oo kaliya ka tagaya Ubuntu, Mandriva iyo laga yaabee OpenSuse inay yihiin kuwo ku xeel dheer taageerada hay'adaha ee lagama maarmaanka u ah heshiisyadaas. Mana aqaano in la qabtay iyo in kale. Waxaan u maleynayaa in isdhexgalka mustaqbalka ee Paypal ee Ubuntu Soft Center ay ka jawaabi karto wadaxaajoodyada noocaas ah shirkadaha sameeya barnaamijyada (iyo ciyaaraha) taas oo horseedi karta in la arko barnaamijyo badan oo noocan ah oo loogu talagalay Linux.
Dhammaan waxyaabaha kor ku xusan waxaan ku iri si gebi ahaanba afduub ama qaab mala awaal ah. Marka in ka badan bayaan waxay noqonaysaa sida su'aal in la ogaado waxa ay ka qabaan iyo haddii taasi noqon karto arrin ama fidsan wax shaqo ah kuma laha
Markii aan idhi ganacsadeyaasha ganacsiga waa u jahaysan yihiin serverka, waxaan ula jeeday inay ku wajahan yihiin labada adeeg iyo ganacsiba, si aan u xoojiyo inaan loogu talagalin adeegsiga "guriga".
Waxaan sidoo kale ku raacsanahay in barnaamijka Microsoft ee ciyaaraha (XNA iyo Directx) uu gaashaan yahay, la xiray ama wixii aad rabto inaad dhahdo. Waana markan oo ay midaynayso desktop-ka, taleefanka iyo XBOX, waxa ay ugu yeedhaan «ecosystem». Waxaan dhihi karaa Android waxay ubaahantahay waxbadan si ay ulaqabsato walaalaheeda waayeelka ah si ay usameyso taas, waana meesha aan u arko inay ku adagtahay, waxaan udhahay tirada dirootada.
Hagaag waxaan ka aqrinayay sii deynta Kernel 3.3 ee Linux iyo Android, horeyba waa loo dhexgaliyay.
Jawaab Juan Pablo Poveda Galvis
Aan daacad ahayn dijo
Waa nasiib daro ... Waxaan jeclahay inaan inbadan ciyaaro ... oo kahor intaanan haysan laptop oo leh mint iyo aati iyo sida maqaalku sheegayo, taageerada ti ati waa wax laga yaqyaqsoodo ... hada waxaan heystaa asus leh nvidia laakiin arimaha shaqada , Waxaa waajib igu ah inaan isticmaalo daaqadaha ... (damn program ቆሻሻ) .. hadii kale, waxaan ku laaban lahaa lintayga xiisaha leh si aan ugu raaxeysto barnaamijka ugu fiican aduunka -> radiotray xD
Ku jawaab Felipeless
Maqaalkaagu waa mid xiiso leh, laakiin waxaad u baahan tahay inaad si faahfaahsan u faahfaahiso dhinacyada qaarkood faallooyinka @ pandev92 iyo jawaabta @Demenus, haddii ay tixgeliyaan. Waa wax badan oo ku saabsan lacagta iyo dhinacyada boqortooyada, maaddaama Microsoft iyo Apple ay yihiin hoggaamiyeyaasha suuqa software-ka dad badanna ay diidaan inay adeegsadaan tiknoolajiyada sida Linux. In ka badan wax kasta, oo ah mashiinnada raasumaalka, waxa ay raadinayaan waa inay si sax ah u nuugaan: "suuqa." Jaleecada hore waxay ka boodaysaa inay tahay boqortooyo, maaddaama xitaa AMD ay la socdaan ATI / AMD Radeon iyo NVIDIA, ay muujiyeen xiisaha ay u qabaan inay suuqa u qaadaan Linux iyagoo adeegsanaya oo taageeraya darawallada softiweer ee bilaashka ah, laakiin sida lacagta iyo saamaynta ay u dhaqaajinayaan ganacsigaas, waa Ma aha inay ku adkaato Microsoft iyo Apple inay isku dayaan inay "gorgortamaan" (laga yaabee xitaa nooc digniin ah), inay horumariyaan oo kaliya ciyaaraha barnaamijyadooda, maaddaama ay tahay mid aad ufiican sababo la xiriira saamiyadeeda weyn ee suuqa iyo wadajirka u wadaagga saamiga suuqa. in Linux ay leedahay, maadaama ay u adeegsadeen qalab ahaan inay muujiyaan kuwa horumariya ciyaarta in suuqani uusan aheyn mid la isticmaali karo oo ay aaminsan yihiin, laakiin ugu dambeyntii waa iyaga, waxay lumiyeen saamiga suuqa ku saabsan 5% iyo qaybta isticmaalka Linux ee ku saabsan 24% adduunka oo dhan, waxay sii daayeen ugu yaraan 50 milyan oo isticmaale.
Ku soo jawaab Espinator
Sidoo kale fikrad aad u fiican [utopia] waxay noqon doontaa in la sii daayo matoorrada sawirada ee ciyaaraha, sida Baahida loo qabo Xawaaraha, Max Payne, iyo kuwa kale, si ay horumariyayaashu u sameyn karaan wax ka bedel isla markaana ay iyaga laftoodu u horumariyaan codsiyada / ciyaaraha, ma dhaawaceyso ... Miyaadan u malayn?
ka guuritaanka tooska ah ee loo gudbiyo 'Opengl' waa mid dhib badan oo amniga soo celinta maalgashiga ayaa loo baahan yahay, taasi waa, hubaal in ciyaarta ay iibin doonto tiro nuqullo ah oo wanaagsan oo ku saabsan Linux, taasi waa sababta aan ciyaaraha loo soo gudbin ...
Nasiib wanaag tani waxay bilaabaysaa inay is bedesho inkasta oo ay jiraan wax aanan u malayn maayo inay waligood dhici doonaan, oo ah inay iibiyaan isku-uruurinta (dell, bangho, lenovo, exo, iwm) maxaa yeelay Linux ma ahan nidaam loogu talo galay qofka isticmaalaya aasaasiga pc ama qof aan waxba ka fahmin nidaamyada, oo si hufan kaligiis u haysta waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu xun
Waqti dheer ka hor ayaan wax isla weydiinayay, ugu dambayntiina waxaan helay meel ay uga fikiraan si isku mid ah aniga ...